Animatronics - Zigong Haitian Dhaqanka Co., Ltd
Our dinosaurs animatronic waa muuqaalka sare lifelike, dhaqdhaqaaqa dabacsan, multi-shaqayn, dhawaaq cad, midab macquul ah, qiimaha raagaya iyo macquul ah oo ku habboon yihiin in park dheeldheel, park quudhin, Jacka park theme, matxafka taariikhda dabiiciga ah, sayniska iyo farsamada museum, Westgate , jidka magaalada, miciinka, cinema.golf Dabcan .. iwm
Socoshada dinosaurs our, waxaad yeelan doontaa waayo-aragnimo Jacka la yaab leh oo aad marna la kulmay. All soo bandhigaa xayawaan qiroweyn dhawaaqa iyo guuxa lifelike iyo dhaqdhaqaaq sameeyaan martida galaan World xayawaan qiroweyn dhabta ah.
Waxaan sameeyo kartaa size kasta iyo nooca xayawaan qiroweyn sida ay shuruud macmiilka. Iyadoo xayawaan qiroweyn cajiib Animatronic, waxa kale oo aad la kulmi Jurasic Park, ma aha oo kaliya daawado filimka. Iyadoo horumarinta ganacsiga, wax dheeraad ah habka soo bandhigaa xayawaan qiroweyn interactive waa la heli karaa.
Intaa waxaa dheer, qaabka design, qurxinta dhirta iyo toy Dino dalab etc.is heli karaa adeegga ka dib markii sale ......
Sidee Waxaan soo saaridda Dinosaurs Animatronic
Alxanka Qaabdhismeedka Steel of xayawaan qiroweyn Animatronic
Waxaan ka dhigi design farsamo for xayawaan qiroweyn kasta oo ka hor-soo-saarka ah in la sameeyo themhave jir wanaagsan iyo loo hubiyo in ay shaqeyn karaan iyaga oo aan wax qaybsanaanta, sidaas xayawaan qiroweyn in yeelan karaan nolol dheer.
Connect All Motors iyo naqshad, dareen taabasho Work on xumbo Mugga Sare
xumbo cufnaanta sare loo hubiyo model u sii dhaafin. sayid xardho Professional wax ka badan 10 sano waayo-aragnimo. Joogaba, jidhka xayawaan qiroweyn Perfect gabi ahaanba ku salaysan lafaha xayawaan qiroweyn iyo xogta sayniska. Show martida macquul ah iyo dinosaurs lifelike.
Sking-Grafting By marsamaysa silikoon
Rinjiyaynta sayidkiisa rinjiga karo dinosaurs sida uu sheegay looga baahan yahay qofka macaamilka ah ee. xayawaan qiroweyn kasta oo sidoo kale jiri doona si joogto ah u hirgelin baaritaanka hal maalin ka hor maraakiibta.
Dhammeeyey xayawaan qiroweyn Animatronic On Site
Cinwaanka: No.1818 Road Huichuan degmada New, Zigong, ee gobolka Sichuan dalka
Ma doonaysaa in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan iyo siraaddo iyo animatronics our ogahay, fadlan ka tago aad email noogu iyo waxaan noqon doonaa in la taabto 24 saacadood gudahood.